Umaka: can-spam | Martech Zone
NgoLwesibili, ngoJulayi 14, i-2020 NgoMgqibelo, Januwari 2, 2021 Douglas Karr
Eminyakeni embalwa eyedlule, elinye lamakhasimende ethu labhala okuthunyelwe okuhle kwebhulogi futhi bebefuna isithombe esihle abazosifaka ngaso. Basebenzise i-Google Image Search, bathola isithombe esasihlungwe njengesingenabukhosi, base basifaka kokuthunyelwe. Ezinsukwini ezimbalwa, bathintwa yinkampani enkulu yezithombe zesitoko futhi bakhonzwa ngebhili yama- $ 3,000 ukukhokhela ukusetshenziswa kwezithombe nokugwema izingqinamba zomthetho ezihambisana
Ngibheka abangane bami abaningi embonini bedlala ngokushesha okukhulu futhi bexegile ngemithetho, futhi ngesaba ukuthi ngelinye ilanga bayoba senkingeni. Ukungazi akulona izaba futhi njengoba lezi kuyizinkinga zokulawula, inhlawulo kwesinye isikhathi ibiza kancane kunokufaka isivikelo esisemthethweni kuyo. Ukwephula okubili okuyinhloko engikubonayo yilokhu: Ukungamemezeli ukuthi unobudlelwano bezezimali nenkampani - noma ngabe ungumnikazi, umtshalizimali, noma
UMsombuluko, May 9, 2016 ULwesibili, May 10, 2016 Douglas Karr
Imithethonqubo yase-United States ehlanganisa imiyalezo ye-imeyili yezentengiselwano yalawulwa ngo-2003 ngaphansi komthetho we-Federal Trade Commission ka-CAN-SPAM. Yize sekuphele iminyaka eyishumi… Ngisavula ibhokisi lokungenayo lami nsuku zonke kwi-imeyili engacelwanga enolwazi olungamanga futhi engenayo indlela yokuphuma. Angiqiniseki ukuthi imithethonqubo isebenze kanjani ngisho nokusongelwa kuze kube yinhlawulo engu- $ 16,000 ngokwephula ngakunye. Kuyathakazelisa ukuthi umthetho we-CAN-SPAM awudingi imvume yokuthumela i-imeyili
Ungamkhetha Kanjani Umhlinzeki Wensizakalo ye-imeyili
NgoLwesine, Septhemba 10, 2015 Douglas Karr
Kuleli sonto ngihlangane nenkampani ebicabanga ukuyeka umhlinzeki wabo we-imeyili nokwakha uhlelo lwabo lwe-imeyili ngaphakathi. Ukube wangibuza eminyakeni eyishumi eyedlule ukuthi ngabe bekuwumbono omuhle lowo, bengizothi cha. Kodwa-ke, izikhathi sezishintshile, futhi ubuchwepheshe bama-ESPs kulula kakhulu ukubusebenzisa uma wazi ukuthi wenzani. Kungakho sithuthukise i-CircuPress. Yini eguquke nabahlinzeki bezinsizakalo ze-imeyili? Ushintsho olukhulu nge